TOKKUUMMAA yeroo jennu oromoon hundi paartii tokko qofa jalatti hiriruu qaba jechuu miti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTOKKUUMMAA yeroo jennu oromoon hundi paartii tokko qofa jalatti hiriruu qaba jechuu miti.
Dhaabbileen siyaasa Oromoo haalota Nageenya fi tasgabbii irratti marii gochaa oolanin galgala kana tokkummaa jaalala fi nageenya walii galteen xumuran. Hayyooliin Oromoo; abbootin siyaasa; Mummicha ministera Itoophiyaa. Dr.Abiyyi Ahmed; ministera Rayyaa ittisaa biyya Dr.Lammaa Magarsaa
activist Jawar Mohammed ;Dr.Merera Guddinaa, Obbo Dawud Ibsaa,Obboo Baqqalaa Garbaa,
PMNO Obboo Shimelis Abdiisaa, Obbo Addisu Arega Jeneeral Kamaal Galchu fi Qaamolee Oromoon irratti argamee waltajjii tokkummaa haalota Nageenya Oromiyaa fi haalota kabaja Ayyana Irreessaa irratti ergaa fi dhaamsa isaanii dabarsuun. Wal dhibdee ilaalcha siyaasaa giddu gidduu jirus karaa nagaatin furuf turtii isaanii irratti mari’atani milkiin xumuraniru.
Oromoo addaan qooduuf kan darsaa raastee maraattu kunoo akkasitti salphatta.
Waaqayyoo Oromoo haa tokkummessu; diina haa facceessu…
Dhaamsa fi Ergawwaan Abbootiin siyaasa fi qamooleen Bulchiinsa/ federalaa fi PMN Oromiyaa/ dabarsan midiyalee irraa guutuu isaa hordofaa!Caaltuu Warra Waddessaa Itti Mudii!!
Walgahii har’a geggeeffameen waliif tumsuuf paartileen Oromoo walii galaniiru jedhame. Akkasumas gaaddisa jaarmiyaaleen siyaasaa waliin mari’atan hundeessuufis walii galan jedhame.
Dhugaa walitti himna! Oromoo tokkummaa jaarmiyaalee siyaasaaf iyyaa ture hamma har’aatti. Garuu yeroo hedduu waadaa seenanii diigan. Muddee 2018, dhuma bara darbee walgahii jaarmayoota siyaasaa fi actiivistoota hirmaachise Galma GG Aadaa Oromoo Finfinneetti godhamee ture. Haala saniin itti fufuuf fooramii jaarmiyaalee siyaasaa dhaabuu irratti walii galanii turan. Ta’ullee waadaan sun achumaan hafe. Yeroo muddaman qofa waadaa seenanii ummata kanatti taphachuun dhaabachuu qaba. Waadaa seentan hojiitti hiikaa!
TOKKUUMMAA yeroo jennu oromoon hundi paartii tokko qofa jalatti hiriruu qaba jechuu miti. Paartiif amantaa kamiyyuu deeggartu dhimma oromoof yaadaaf tumsa waliif ta’uudha.
Rabbiin asumaan walitti nu haa ittichu. Gadaan Gadaa milkii nuuf haa ta’u.
Oromoo ta’ee namni kana argee hin gammadne, yoo jiraate inni maraataadha.
Gootota Dhugadhaf Wabsawee Hamma Ammatii isan kana Qofa Garuu Akka hin Sobamane Jaran OPDO tofata WBO itti hikkachiisu Qofa ummacha jira Hubadha waa dubbachuuf fedhe garuu akkan itti hubadhuu wallalee malee isa haa dhifadhuu Gaafi kana Naf debisa Waligalateen kana Dura Godhamee isa kammatu hojiiti hiikamee lata ?
Maree Dhaabbilee Oromoo Gidduutti taasifamee Ture Ilaalchisee Ibsa Skylight Hotel-tti Waloon Kenname, Onkoloolessa 1, 2019. https://t.co/4785kTsk5n
— Kichuu (@kichuu24) October 1, 2019
Akkam Ooltan? Nu waan agartan saniifi kan birootti oolle. Abdiin jira. Shakki akka qabdan naaf gala. Dhugaa qabdan. Wanti akkanaa amma duras yaalamee akka bakka eeggame hin gain namuu beekna. Marsaa kana garuu kan duriin adda gochuu yaallee jirra. Waan hojjanne hunda ammatti isinitti hin himnu. Waanuma ijoon isiniif qooda.
– Ji’a 6 yeroo ta’uuf marii hogganoota paartilee siyaasaa geggeessaa turre. Marii kana hayyoonni hirmaachuun gargaaraa turan. Dhaabbata CBCD jedhamutu qindeessuun nu gargaare. Dhumarratti waliigaltee lamaafi ijaarsa tokko gadi baafne. Ejjannoo waloofi safuu/irbuu jaarmayoota siyaasaa Oromoo har’a mallatteessan kana qopheessine. Akkasumas wixinee Gaaddisa Hoggansa Oromoo dhaabuu lafa keenye.
– Guyyoota lamaan kana waan ji’a jahaaf dalagne san lafa qabsiisnee hojitti huukuuf mariifi shaakala nu dandeessisu hojjanne. Marii guyyoota alamaanii kana dura taa’ota dabalatee jaarmayoota hunda irraa nama kudhan kudhan hirmaachifne. Mariifi shaakkala jaarmaya ogummaa kanaan beekame Synergros jedhamu kan hayyuufi qabsaa’aa qameessa Abarraa Tolaan hogganamutu nuuf qindeesse.
– Waliigaltee kana hojitti hiikuuf tarsiimoofi karoora akka hogganu Gaadisa Hoggansa Oromoo dhaabne. Gaaddisni dura taa’ota jaarmayootaa shanan of keessaa qaba. Isaanis Gaaddisa kana Obbo Lammaa Magarsaatu qindeessa. Hogganota jaaramayalee jalatti kan hojjatan namoota shan ramadamanii jiru. Obbo Leenco Lataa, Galaasaa Dilboofi Diimaa Nogoo gorsitoota. Anaafi Abarraa Tolaa haala mijeessitoota ( facilitators) taanee dirqama fudhannerra.
– MM Abiy Ahmad argamuun hojii hajjatameef galateeffachuun murannaafi tumsa mataa isaaniifi mootummaa mirkaneessaniiru. Waan fulleffatamuu qabu jedhanis marii cufaa irratti dabarfataniiru.
– Jilli hirmaattota ajandaalee dursa kennameefi irratti dalagamuu qabu nuuf eeraniiru. Hoggansi kun guyyota as deeman keessa walgahuun karoora hojii lafa kaaya. Yeroo gabaabaa keessatti marii itti aanu qopheessa.
hagana carraaqne. bakka nuti hanqifne rabbi itti haa guutu. isinis hamileefi eebbaan nu bira dhaabbadhaa.
Irreecha Tokkumaafi Nagayaa nuuf haa ta’u
Paartilee fi namoonni gurguddoo Oromoo hundi tokkummaa Oromoo eegu, nagaa tiksu, filannoo dhufuf tarsimoo wal-hubataa qabbachuu fi seera kabaju irattii walii galuun mallattoo isaanitiin raggaasisaniiru. Kuni waan baay’ee nama gammachiisu. Ammaa achii yoo tokkoo waligaltee kanarraa goree ummata Oromoo waliin lola jalqabe jechudha.
OBN Ful. 20,2012-Paartiileen Siyaasaa Oromoo dantaa uummata oromoo kabachisuuf qindoominaan hojjachuuf Hoggansa Gaaddisa Oromoo hundeessan.
Paartileen siyaasaa Oromoo kunneen marii ji’oota shanan darbanitti osoo waliirraa hin citiin mari’ataniin faayidaa uummata oromoorratti tokkummaan hojjachuuf waliigaltee mallatteessaniru.
Ibsa ejjannoo waliigaltichaas Obbo Jawaar Mohaammad, Daareektara Olaanaa OMN fi Xinxalaa Siyaasa dhiheessaniru.OBN Afaan Oromoo
OBN FUl. 20,2012-Ibsa Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad addatti OBNf kennan
OBN Ful. 20,2012-Ibsa Ministirri Raayyaa Ittisaa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa addatti OBNf kennan.
Diraamaa OPDO: OPDO’n Finfinneetti ABO wajjiin Araaraaf nagaya Jattee Waliigaltee mallatteesitee Suuraa wajjiin kaati nama gowwoomsuuf.Garuu Ganda keeysa deemtee Shanee deeggartan jachuun Sabbontoota Oromoo dhiiga boochifti. Sobni OPDO kun dhaabbachuu Qaba!!
New ETHIOPIAN OROMO MUSIC #Gammachiis Gurmeessaa- 2019
1- Oromo Libration Front *ID of Oromo people
2- Gada System Advancement Party
3- Front for Independent Oromiya
4- Oromo Federalist Democratic Movement
5- Oromia Liberation National Party
6- Oromo Peoples Congress
7- Oromo Democratic Part
8- Oromo Libration Unity Front
9- Oromo Abo Libration Front
10- Oromo Peoples Democratic Union
Samuel Gezahegn Belachew
Jowwaar Mohaammedtu jedhe”
Lammaa Magarsaa Hoogganaa Garee kanaati
Ani Jowwaariifi Gurbaan Kaan Qindeessitoota
Hayyee Yaa Lammaa Yaabitaachoo!
#Kun ammoo Fiilmii Bareedaa #Irreecha dura qophaa’eedha. Qooddataan Shira Fiilmii kanaa ergamaa ‘Bi’eel Zebuul’ kan ta’e Jawar Siraj dha. Oromootu abdii kutee qabsoo Bilisumamatti seenuuf jedha. Sana rukutuuf waan foorjidii wayiitiin as ba’uu qaba. Tuutni ijaarame kunis kan shiraan borcamedha. Waan qulqulluufi ajandaa Oromoo deebisuuf ijaarame miti. Kanaaf hamma lubbuun jirutti OPDO aangomsuu qaba; kan jedhu durumaan ejjennoo Seexantichaati. Kanammoo waggaa 15 dura ooggantoota Bineensicha duraanii Juuneddin Saadoofi Abbaa Duulaa Gammadaatiin kaadhimamee miliyoonni ramadamee Chaayinaatti ergamee achumaan hojii shiraaf USA tti ergame. Sodaan guddaan aanga’uufi milkaa’uu kaayyoo Oromoo/ABO ti. Akkas gaarii fakkeessanii fiilmii dhiyeessan malee malee qabsoo haqaa karaatti jaamsantu hinjiru. Amma kunoo kun adeemsa umurii dheereffannaa Garboomsaati. Kanaaf baajeta jajjabootu jira; ramadameeras. Yaa dhaloota nana, waan adeemaa jiru kuniifi afaan toliitiin miidiyaarraan dhiyeeffamaa oolu kun waanuma garboomsaan ammayyaa kun raawwatudha. Waaqayyo inni anaaf ija banee iccita shria kanaa daawwachiisaa jiru kun siniifillee ija keessan banee waan itti jiramu kana isin haa agarsiisun jedha!
Gammee Amboo:Qeerro Gachana Biyya Ginchi Haala Kanan Irreechaa Finfinnee irratti hirmaachuf qophii xumureera!